Ekipa sy serivisy
Inona no hitranga amin'ny fanondranana lamba sy lamba amin'ny tapany faharoa amin'ny taona?
Ny varotra lamba sy akanjo any Sina dia tsy fahita tamin'ny tapany voalohan'ity taona ity noho ny fiparitahan'ny COVID-19. manerantany. Ny toe-javatra ankapobeny amin'ny tapany faharoa amin'ny taona dia sarotra sy miova, ary mbola mila mandinika azy bebe kokoa isika. A ...
Sakafo hariva ho an'ny mpiasa alohan'ny Fetin'ny Lohataona 2020, mitsitsia angovo hamoronana taom-pijinjana bumper manaraka!
Amin'ny faran'ny taona 2019 dia hamintina ny asa tamin'ny taon-dasa izahay, amin'ny fanamafisana manokana ny olana amin'ny asa, ary avelao ny tsirairay hahatadidy ny hanao asa tsara kokoa amin'ny Taom-baovao. Manana mpamorona kinova izahay, ireo santionany roa. mpiasa, mpitantana famokarana, fividianana, QC, mpitan-kaonty, efatra sa ...
Seho amin'ny majika amin'ny febroary 2020
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-12-17
Hanatrika ny fampisehoana MAGIC SHOW isika amin'ny febroary 2020, miambena hatrany amin'ny vaovao farany.
Ity fampirantiana ity dia natao tany Moskoa, Rosia ary firenena akaiky azy no tsenanay voalohany. Manana mpanjifa marobe izay niara-niasa taminay nandritra ny 10 taona mahery izahay. Miaraka amin'ny fampiharana ny politika One Belt And One Road any Shina, manana izahay nitondra vokatra manokana ho an'ny Rosiana mar ...
Hanatrika ny International Sourcing Expo Aostralia isika amin'ny 20-22 Nov, 2018 any Melbourne. Ny booth No misy anay dia V27.Fandraisana an-tanan-droa ianao Manantena ny hihaona aminao any. Sambany izahay manatrika ny fampirantiana any Melbourne, ireo mpividy amin'ny fampirantiana ...
Mihaona aminao amin'ny Magic Show any Las Vegas amin'ny 11-14 Feb 2018. Ny booth misy anay dia 63217-63218. Tongasoa eto ianao hitsidika ny trano rantsan-kazo sy hijery ny endrikay vaovao. Manantena ny hihaona aminao. Faninefany izao hanatrehantsika ny foara, izay nametrahanay fiaraha-miasa sy iarahan'ny mpiara-miasa ...
Address:RM4A22, Trano B, Ritan International Trade Center, Distrikan'i Chaoyang, Beijing, Sina 100020